Albert na Kupfer: 2 Ezigbo Pitchers dị ka Brain Ndị ọzọ | Site na Linux
N'agbanyeghị, ụdị nke Usoro njikwa na anyị na-eji na ọbụna kọmputa, n'ihi na ọ dịghị onye bụ ihe nzuzo, nke dị mma mgbe niile ojiji nke kiiboodu na uzo uzo na nke kachasị ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị iji ya eme ihe oke (oke).
Na n'ihi nke ahụ, n'ọtụtụ Sistemụ nrụọrụ na Ngwa, a na-akpọ zọ mkpirisi keyboard (hotkeys) ma ọ bụ ihe a na-akpọ Ndị na-amalite, nke omume ma ọ bụ ngwa, ka melite arụpụta ọrụ. Na nke anyi GNU / Linux Distros anyị nwere ezigbo ihe atụ, a na-akpọ otu n'ime ha ngwa "Brain", nke anyị kwuru banyere ya n'oge na-adịbeghị anya anyị kwuru maka ya, na ndị ọzọ ndị ọzọ anyị ga-ekwu okwu banyere ha taa ọzọ. Ha bụ "Albert na Kupfer".
Isiokwu nke njirimara onye ọrụ banyere Sistemụ arụmọrụ dị iche iche, ọ nwere ike ịbụ obere ihe maka onye ọrụ nkịtị, mana maka ndị dị ndị ọkachamara na teknụzụ ma ọ bụ site na mpaghara ọrụ ọzọ, ọ dị mkpa anaghị etinye aka na omume metụtara ịpịpụta oke nke oke oke ịrụ ugboro ugboro ma ọ bụ ihe omume kwa ụbọchị.
Na nke ahụ, GNU / Linux Distros, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ atụmatụ dị ebube, nwere nhọrọ dị oke mma maka ngwa ma ọ bụ mmemme launchers iji kpochapụ ụdị ọrụ ahụ dị egwu na-ebelata iji òké, na omume dị ka, gaa na ngwa ngwa ma mee ngwa ma ọ bụ gaa na njedebe ma mee iwu.
1 Pitchers: Albert na Kupfer ịbawanye arụpụtaghị ihe
1.2 ọla kọpa
1.3 Ndị ọzọ agbapụtara agba
Pitchers: Albert na Kupfer ịbawanye arụpụtaghị ihe
Dị ka ndị mmepe ya si dị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, Albert bụ onye mbido kọwara dị ka ndị a:
"Mgbapụta ike ịnweta ihe niile na-enweghị ihe ọ bụla mgbalị. N'ihi ya, ọ nwere ike ịrụ ọrụ, mepee faịlụ ma ọ bụ ụzọ ha (folda / akwụkwọ ndekọ aha), mmeghe ibe edokọbara na ihe nchọgharị, ịchọ weebụ, ịgbakọ ihe, na ọtụtụ ndị ọzọ. Albert bụ onye na-ahụ maka agnostic nke desktọọpụ, onye ihe mgbaru ọsọ ya bụ ojiji na ịma mma, arụmọrụ na ịgbatị. Edere ya na C ++ ma dabere na nhazi Qt. Emepụtara ya n'okpuru ikikere GPL, 100% free na oghere mepere emepe".
Ugbu a na-aga maka ụlọ mbipute nọmba 0.16.1 Nke ụbọchị 12 / 2018, ma nwekwa weebụsaịtị na GitHub.
Dị ka ndị mmepe ya si dị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, Kupfer bụ onye mbido kọwara dị ka ndị a:
"Kupfer bụ interface maka ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa na akwụkwọ ha. Ihe kachasị eji eme ihe bụ ịchọta ngwa a kapịrị ọnụ ma malite ya. Anyị agbalịrị ime ka Kupfer dị mfe iji gbakwunye na plugins ka e wee nwee ike ịgbatị ngwa ngwa a ngwa ngwa n'ọtụtụ ihe karịa naanị ngwa. Anyị nwere olile anya na iji Kupfer bụ ihe ọchị. "
Ugbu a na-aga maka ụlọ mbipute nọmba 3.19 Nke ụbọchị 03 / 2017, ma nwekwa weebụsaịtị na GitHub.
Ndị ọzọ agbapụtara agba
Ee gị, n'ihi ihe ụfọdụ agaghị eji dị ka launcher ngwa a Brain, Albert ma ọ bụ Kupfer, ọ ka mma na ị họrọ otu dịka Ihe ngosidị ka, ndị ọzọ niile bụ ihe mgbe ochie, agbahapụ, ma ọ bụ emelitere mana ha bụ maka otu desktọọpụ gburugburu ebe obibi. Ihe ngosi Ọ bụ oge a, na-aga n'ihu, na-akwado onye na-ebupụta ihe, nwere ọtụtụ mgbakwunye dịnụ ma ọ dabere na otu Desktọpụ Environment. Yabụ, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-ebipụta ya.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Albert y Kupfer», nke bụ 2 magburu onwe ya ngwa ngwa nke ụdị Ndị na-amalite, dị ka mma Brain na Ulauncher; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Albert na Kupfer: 2 magburu onwe pitchers dị ka ndị ọzọ na Cerebro
Ọfọn, ọ bụrụ na emeliteghị Kupfer ruo ogologo oge, echere m na a ga-agbahapụrịrị ya, nke ahụ ...
Ekele Teo! Enwere m olileanya na ị masịrị ọdịnaya ahụ ma ọ bara uru.
O doro anya na ọtụtụ ndị na-agba egbe na-na ifriizi mode ma ọ bụ gbahapụrụ. Ndị na-anọgide na-adị ugbu a ma na-arụ ọrụ bụ, maka m, Cerebro na Ulauncher. Nkewa ma ọ bụ ọnụ ha magburu onwe ha na nkọwa ha, nke ga-adabere n'ezie, na Distro ebe enwere ike iji ha. M ga-eji ha ọnụ na kọmputa m, ebe ọ bụ na ha enyeghị m nsogbu ọ bụla, n'ihi na ọ dị ike nke ọma ma ha na-arụ ọrụ zuru oke na MilagrOS 2 (MX Linux 19).
Ulauncher ka amasị m
Ekele Logan! Dịka ị pụrụ ịhụ ebe ahụ, anyị atụ aro Ulauncher mana ọ bụghị dị ka onye nnọchi nke Brain mana ka mmeju, ebe ọ bụ na Ulauncher na-erepịa ọtụtụ ebe nchekwa RAM. Ekwadoro m ka ị jiri ya na-enweghị mgbakwunye na Cerebro.
Firefox 77, ụdị nke gbanwere ọkachasị ndị mmepe